Taariikhda My Butros » 8 Great Date First Su'aalo Waxaad Weydiinayaa
Waxaan dhammaan jirtay taariikhaha koowaad. Haddii ay keentay in xiriirka ama ku dhamaatay ah oo timir yar ka dib, aynu wada ognahay cadaadiska iyo walaaca in la iman tan kulankii kowaad ee ugu horreeya. Dhab ahaantii, taariikhaha marka hore loo kala saari karaa mid ka mid ah inta badan xaaladaha dareemayaasha-xirtey ee bulshada. Laakiin waxaan kuu sheegi doonta in on qarsoodi yar: fure u ah taariikhda ugu horeysay guul waa xawaal, wada hadal raaxo. Tan si fudud loo gaari karo iyada oo si fiican u doortay horeysay su'aalo taariikhda.
Yaa ayaa saameyta ugu wayn ee nolosha?
By waydiinta su aashan, aad si fiican u fahmi doonaa taariikhda ee anshaxa iyo qiyamka. Waxa kale oo aad tusi doonaa cidda ay u aadi doona si ay u tilmaam iyo talo.
Halkee meel aad jeceshahay in caalamka oo dhami yahay? Waa maxay sababta?
Haddii ay xeebta, Buuraha, ama meel u dhexaysa, su'aashan siin doonaa fikrad dabeecad taariikhaha aad '.
Waa maxay movie aad jeceshahay ee waqtiga oo dhan? Waa maxay sababta?
Ma aha oo kaliya ku arki doono dhadhankii iyo danaha taariikhaha aad 'laakiin sidoo kale waa tilmaame wanaagsan si loo arko haddii aad tahay fasiraad.
Waa maxay gool aad ugu weyn ee nolosha hadda?
Su'aashani waxa aad kaliya ma sheegi doonaan sida hami aad taariikhda yahay laakiin siin doonaa fikrad marxaladda dhabta ah ee nolosha ee ay ku jiraan.
Waa maxay qaabka aad ugu jeceshahay inaad ku bixisaan aad todobaadkan?
Jawaabta su'aashani waxa ay tusi doonaa taariikhda ee nololeed, danaha, iyo hiwaayadaha. Tani waa su'aal kale oo wanaagsan si aad u aragto haddii aad tahay fasiraad.
Maxay ahayd qoyskaaga sida koraya?
Helitaanka mariska ah ee sida taariikhda la sara kiciyey muujin doontaa in aad sida ay u kicin doonaa (ama mararka qaar,, Bixinhaynin) carruurtooda mustaqbalka. Jawaabta Tani waxay sidoo kale waxay muujinaysa sida ay u badan taariikhda ayaa lala macaamilaa nolosha, muujinaya xitaa more of ay dabeecaddiisa.
Maxaad u heli soo jiidasho?
Ka sokow isagoo chemistry iyo soo jiidashada jirka, dhegaysta tayada taariikhda sharaxayaa. Jawaabta su'aashan ayaa la sheegaya in ay waxa ay dhab ahaan ay doonayaan in la Wadaage. Iyo inta badan, tayada ay taxaan waa kuwa in ay naftooda u hantidaan.
Waa maxay hal maalin oo aad jeclaan lahaa dib u nooleeyaan?
Su'aashani waa wax ka sheekeynta sida aad oo keliya ma heli milicsi gaaban oo aad taariikhda ee nolosha laakiin aad hesho si aad u nooleeyaan iyaga la waayo, kuwii daqiiqo kooban sida ay u qeexi inaad.
Dabcan su'aalahan waa keliya tallaabadii ugu horreysey. Inta aad maqli udhug, waa kuma ay aad shakhsi ama danayn, oo waa dhab, aad hubto in ay taariikhda ay farxad leh ugu horeeyay.